Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Taariikh kooban oo ku saabsan dadka Soomaalida iyo marxaladihii ay soo mareen‏
Taariikh kooban oo ku saabsan dadka Soomaalida iyo marxaladihii ay soo mareen‏
Dadka Soomaalidu, Waa dad ku nool dhul ballaaran oo ku yaallo Bariga Qaaradda Afrika, inkastoo qeyb ka mid ah dhulkaasi ay xoog ku haystaan dalalka Itoobiya iyo Kenya. Soomaalida waa dad ka duwan dadyowga kale ee ku nool Qaaradda Afrika. Tusaale ahaan, Waa dad wadaaga sida diin, dhaqan iyo waliba luuqad, Waana sababtaasi sababta markasta loo yiraahdo Soomaalidu ah waa qoys qura.
Qoyskani, Waxa uu ku hadlaa hal luuqad oo la yiraahdo Soomaali, Waxa ayna Luuqaddaasi leedahay lahjado kala duwan, Sida Mayga iyo Maxaatiriga oo kale. Marka aan u nimaadno dhanka diinta. Dadka Soomaalidu waa dad Musliim ah 100%, Islamarkaana ah Muslimiinta loo yaqaano Suniga. Waana dad raacsan Madhabta Shaaficiyadda ah, inkastoo laga yaabo in ay jiraan dad kale oo ku dhaqma Madaahiibta kale.
Dadka Soomalida, intooda badani waa dad xoolo dhaqato ah, Waxayna dhaqdaan sedexda nooc ee xoolaha ah sida Geel, Ari iyo waliba Lo’. Waxaa sidoo kale jira dad kale oo Iyagana beeraley ah. kuwaas oo intooda badani ay ku dhaqan yihiin, inta u dhaxeysa Labada Wabi ee la kala yiraahdo Jubba iyo Shabeele. Maadaama ay dadka Soomaalidu daris la yihiin labo Badood oo muhiim ah sida Badweynta Hindiya oo kale, dabcan waa iska caadi in la helo dad kale oo Iyagana Kaluumeysata Badahaasi.
Inta aysan imaanin Gumeystayaashii reer Yurub, sida Ingiriis,Talyaani iyo waliba faransiis. Dadka Soomaalidu, Waxa ay ahaayeen dad ku nool dhul ballaaran oo isku furan. Kaas oo qoyska Soomaaliga ah u ogolaanayo in uu u guuro meesha uu doono, Islamarkaana uu dejiyo xoolihiisa goobta uu rabo walow mararka qaar ay dhici jireen gacan ka hadalo ay sabab u ahaayeen daaqa iyo biyaha.
Sida aan kor ku soo xusnay, Ma jirin Gumeystiyaashii reer Yurub ka hor wax la yiraahdo xuduud, taas oo kala soocda deegaanadii ay ku noolaayeen dadka Soomaalida ah, marka laga soo bilaabo Jibuuti ilaa laga soo gaaro dhulka loo yaqaano NFD ee ay Kenya xoogga ku haysato. Laakiin markii ay Gumeystiyaashii yimaadeen, Waxa ay ku dhaqaaqeen in ay dhulkii kala qeybiyaan, Islamarkaana kala qaataan si ay ugu fududaato gumeysigoodii. Tusaale ahaan, Faransiiskii waxa uu qaatay dhulka loo yaqaano Jibuuti halka Ingiriisna uu qaatay dhul ballaaran, Kaas oo dhacayey Waqooyiga iyo Galbeedka iyo waliba dhulkii loo yaqiinay NFD.
Waxa sidoo kale Gumeystiyaashii ka mid ahaa Talyaani Koofi-weyne, Isagoo qeyb ahaan u helay dhulkii koonfureed ee ay Soomaalidu deganeyd. Shirkii Baarliin ee 1884, kaas oo ay ka soo baxday fikraddii lagu kala qeybsaday Qaaradda Afrika. Waxa uu Shirkaasi raad xun ku reebay dadka Soomaalida ah, Maxaa yeelay waxa uu kala qeybiyey dhulkoodii iyo dadkoodii midka ahaa.
Inkasta oo ay Soomaalidu halgan dheer u gashay sidii ay isaga kicin lahayd Gumeystihii ku soo duulay, sida Ingiriis iyo Talyaani oo kale hadana halgankaasi uma miradhalin sidii laga rabay sababa badan oo jiray awgood. Tusaale ahaan, halgankii dheeraa ee Darawiish iyo Sayid Maxamed Cabdile Xasan, Waxa uu ku soo gabagaboowday guuldaro ka dib markii qaar ka mid ah Soomaalidii la safatay Gumyesigii. Intaas kuma ekaanin halgankii gumeysi diidka ahaa ee waxaa mar kale soo baxay ururo iyo shaqsiyaad kale sida ururkii SYL oo kale.
Maadaama ay dadka Soomaalida ku ibtileysan yihiin bahlkan la yiraahdo qabiilka. Taasi waxa ay fursad siisay Gumeystiyaashii soo duulay, Iyagoo jaanis u helay in ay Soomaalidii kala qeybiyaan ka dibna gumeystaan, sida ay maantaba Xabashidu sameysneyso ( Qeybi oo Xukun) Halgan dheer oo ay hormuud u ahayd SYL iyo dad la safnaa. Ugu danbeyn, Waxaa xuroobay Sanadku markii uu ahaa 1960 labo qeybood oo ka mid ahaa dhulkii ay haysteen Gumeystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga. Waana dhulkii waagaasi loo yaqiinay (Italian Somaliland) iyo (British Somaliland). Kuwaas oo markii danbe iskudarsaday, lana baxay Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Markii la dhisay Jamhuuriyaddii Soomaalida ee ka koobneyd Koonfur iyo Waqooyi, Islamarkiiba waxaa bilowday dadaalo dib loogu xureynayo dhulkii maqnaa sida Jabuuti oo kale, iyo waliba dhulkii kale ee ay haysteen Xabashidii iyo Kenyaatiga. Nasiib wanaag sanadku markii uu ahaa 1977, Waxaa xuroobay halgan dheer ka dib, dhulkii loo yaqiinay Jibuuti ee uu Faransiisku gumeysnayey, halka labadii qeybood oo kale ay wali baaqi ku yihiin gacanta dowladaha Itoobiya iyo Kenya.
Inkastoo Soomaalidii xurowday ay heleen Qaran ay Iyaga iska leeyihiin, hadana nasibdaro waxaa dhacday in ay Qarankoodii ku dumiyeen talo xumo iyo madax adag ka imaaneysay qaar ka mid ah siyaasiyiinta waagaasi majaraha hayey. Taasna, Waxa ay ugu danbeyn dhaxalsiisay 30 sano oo dagaal sokeeye, kaas oo ilaa maanta socda. Dadka qaar, Ayaa is weydiiya sabab ay ku dhacday in ay Soomalidu ka bixi weydo duliga iyo dowlad la’aanta maadaama ay maanta nool yiihiin dadkii ugu cilmiga iyo caqliga badnaa ee soomara dadka Soomaalida ah.
Tusaale ahaan, maanta waxaa nool culimo badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo cilmi iyo caqliba isku darsaday sida Sh. Cali Warsame, Sh.Jaamac Cabdi Salaan, Sh. Cabdulaahi Raabi, Sh. Maxamed Xaaji Yuusuf, Sh. Xasan daahir Aweys, Sh.Umal, Sh. Mustafa Xaaji, Sh. Maxamed Idris, Sh.Cabdiraxmaan Sh.Cumar, Sh. Shibli, Sh.Xassaan Xuseen (Abuu Salmaan), Sh. Cabdirashiid Cali Suufi, Sh. Xasan Jaamici, Sh. Axmed Cabdi Samed iyo Culimo kale oo badan, hadana saas oo ay tahay maanta waxaa daadanayo dhiiggooda, dowladnimana warkeeda daa!
Dhanka Aqoonta Iyadu ka hadal maleh. Bal ila fiiriya raggan Axmed Saciid Samatar, Cabdi Saciid Samatar, Afyare Cabdi Cilmi, Xuseen Warsame, Maxamed Xaaji Mukhtaar, Cabdiqaasim Salaad, Farmaajo, Jawaari, Xasan Sheekh, Axmed Siilaanyo, Maxamed yoonis Biixi, Faysal cali Waraabe, Cabdiwali Gaas, Cali Khaliif, Cumar Cabdirashiid, Cabdiwali Sh. Axmed, Saacid Shirdoon, Cabdiraxmaan Bayle, Cabiraxmaan Baadiyow, iyo kuwa kale oo badan, hadana aqoontaasi waxba kama badelin xaaladda ay ku sugan tahay Soomaalida haday ahaan lahayd siyaasadda, aminiga iyo waliba dhaqaalaha.
Siyaasiyiin ay ka mid yihiim, Barre Hiiraale, Maxamed Cabdi Yuusuf, Tarsan, Goodax Barre iyo rag kaloo badan, Waxa ay maalmahani sii deynayeen waraysiyo ay ku sheegayaan in ay Soomaalidu u gacan gashay gumeysi cusub oo ay hormuud u tahay Itoobiya. Kaas oo ujeedadiisu tahay, in marka hore la kala qeyb qeybiyo ka dibna si toos ah loo qaato dhulkooda, Iyadoo la adeegsanayo kooxda Tuunji Amxaaro iyo dabaqoodhiyada kilalka
Mar hadaanu sheegnay xaalka ay ku sugan tahay Soomaalidii xurowday 60-kii. Bal aan sidoo kale raacino kuwa Iyagana wali ku hoos nool gumeysiga Itoobiya iyo Kenya. Inkastoo Soomaalida la nool gumeysiga Kenya ay sameysay waxoogaa horumar ah, oo xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha ah hadana wali waxaa loola dhaqmaa sida muwaadiniin darajada labaad (Second class citizen). Kuwaas sida la rabo laga yeelo marka la doono. Amma Soomaalida ay gumeysato Xabashidu, Iyadu ka hadal ma leh, waayo kuwaasi waxaa ku socdo xasuuq iyo baabi’in joogta ah.
Marka aan hadalka isku soo xeerino, Waxaa runtii noo soo baxeysa in ay Soomaalidu marayso marxalad adag oo qatarteeda leh. Taas oo u baahan in la helo dadkii wax ka qaban lahaa inta ay goori-goor. Hadaba aqristow aan su’aal ku weydiiyee yaa u maqan dadkan ? Ma waxaa la waayey shaqsiyaad iyo kooxo u istaaga joojinta dhiiggan daadanayo maalin kasta ? Ma waxaa laga waayey Umadda intaan la’eg dad ka shaqeeya islaaxa iyo dib-uheshiisiinta ? Kolay Anigu ma garanayo meesha la la’yahay.
Xusuusin: Qormadeena danbe haddii uu Rabbi idmo, Waxaan kaga hadli doonaa sida loo heshiisiin karo dhinacyadan is dilayo iyo cidda ku haboon in ay doorkaasi qaadato. fadlan wixii talo ama tusaale ah iigu soo aadi e-mailka hoos ku qoran.
W/Q: Cabdullahi Ibrahim
US closes Djibouti embassy after threats
Dowladda Maraykanka Oo Xaqiijisay Magaca Sarkaal Al-shabaab Ah Oo Duqeyn Ay Ku Dileen Diyaaradahooda